April 16, 2018 April 16, 2018 Aagan Post0Comments
बि.स.२०७५ बैशाख ३ गते । सोमबार । आजको राशिफल यस प्रकारका छन् :-
आफन्त तथा चेली माइती बिच बैमनस्यता बढ्ने ग्रहयोग रहेको छ सचेत रहनुहोला । व्यापार व्यावसायमा समय दिन नसक्दा घाटा लाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । माया प्रेममा धोका हुँनेछ भने पति दाम्पत्य जीवनमा घटपट आउँनेछ । समय तथा परिस्थिति अनुसार नचल्नाले दुख पाइनेछ । सामान्य स्वास्थमा समस्या आई उपचार खर्च बढेर जानेछ । पढाई लेखाइमा समय दिन नसक्दा अरूभन्दा पछि परिने चिन्ताले सताउँनेछ ख्याल गर्नु होला । सामाजिक संजालमा बढि व्यस्था हुने हुदा तपाइलाई यो साल शारीरिक समस्या निम्तिन सक्छ । यो साल धन सम्पति जोड्ने योग रहेको छ ।
माया प्रेममा मनमुटाव सिर्जना हुँनेछ । पति पत्नी बिच अविश्वास बढ्नेछ । आकस्मिक खर्च बढ्ने तथा आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्या आउँने भए पनि दैनिक काम गर्न गाह्रो हुने छैन । साथीभाइ तथा आफन्त हरेको भेटघाटले नयाँ काम गर्ने अवसर आयपनि फाइदाको लागि अलि बढी मेहनेत गर्नुपर्नेछ । पढाई लेखाइमा अलि बढिनै समय दिनुपर्नेछ । कुनै नया काम को थालनी गर्दा सोच बिचार गर्नु होला ।
आफन्त तथा अग्रज बिच बैमनस्यता बढ्ने ग्रहयोग रहेको छ सचेत रहनुहोला । व्यापार व्यावसायमा समय दिन नसक्दा घाटा लाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । सामाजिक संजालको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । माया प्रेममा धोका हुँनेछ भने पति दाम्पत्य जीवनमा घटपट आउँनेछ । पढाई लेखाइमा समय दिन नसक्दा अरूभन्दा पछि परिने चिन्ताले सताउँनेछ । सवारी साधनको प्रयोग गर्दा वा चलाउँदा ध्यान दिनुहोला । सरकारी तथा प्रशासनिक कामहरू गर्दा ध्यान दिनुहोला दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने हुँन सक्छ सचेत रहनुहोला ।
व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी भने जस्तो नाँफा कमाउँन सकिनेछ । शत्रु तथा प्रतिस्पर्धीहरू परास्त हुँनेछन् । बित्या तथा प्रतिस्पर्धामा तपाइकै नाम अग्र स्थानमा आउँनेछ । भनेको समयमा सामाजिक कामहरू बन्ने हुँनाले छोटो समयमा नाम तथा दाम कमाउँन सकिने हुँदा घर परिवारमा खुसीयाली छाउँनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ । साथीभाइ सँगको सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण बन्नेछ । सरकारी सम्पत्ति तथा पृत्रिक सम्पत्ति हात पर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ ।
यात्राबाट भनेजस्तो उपलब्धि हात पर्ने ग्रहयोग रहेको छ । वादविवाद तथा मुद्दा मामिलामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई हराउँदै जित निकाल्न सकिनेछ । सामाजिक संजालको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । पढाई लेखाइमा मन जाने हुँनाले अरूभन्दा अग्र स्थानमा तपाईँको नाम रहेनेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानी बढाएर प्रशस्त आम्दानी कमाउने योग रहेको छ, पैसा कमाउँन सकिनेछ । सामाजिक संजालको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।माया प्रेममा सामिप्यता बढ्ने तथा दाम्पत्य जीवनको गाँठो अझ मजबुत भएर जानेछ । मामा घर तिर बाट भनेजस्तो सहयोग प्राप्त हुँनेछ ।
माया प्रेममा धोका हुँनेछ भने घर परिवारमा आफन्त तथा पति पत्नी बिच मनमुटाव बढ्नेछ । तपाईँको आलोचना गर्नेहरु बढ्ने योग रहेको छ । व्यापार व्यावसाय खस्केर जाने हुँनाले दैनिक गुजारा गर्न गाह्रो हुँनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरूको अवरोधले आउँन तथा हुनै लागेको फाइदाको सम्भावना टरेर जानेछ । मामा घर तिर बाट भनेजस्तो सहयोग प्राप्त हुँनेछ । सामाजिक संजालको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा समय लगानी गर्नेहरुले भनेजस्तो आम्दानी गर्न सक्नेछन् । पढाई लेखाई तपाईँ आफ्नै कारणले बिग्रन ग्रहयोग रहेको छ ।
नराम्रो काम तथा नराम्रा घटनाहरूको सामना गर्नुपर्दा दिनलाई सही रूपमा सपदुपयोग गर्न सकिनेछैन । अध्ययन तथा अध्यापनको क्षेत्र तपाईँ आफ्नै कारणले कमजोर रहनेछ । बोल्दा वा कुनै पनि प्रस्तुतिमा भाग लिँदा प्रशस्त तयारी गर्नुहोला कमजोरी गरेको वा भएको आभास हुँनेछ । तयारी बिनानै प्रस्तुत गरिने कुनै पनि योजना विफल हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । व्यावसायमा सामान हराउँने तथा नाँफा कमाउँन अरू दिन भन्दा बढी समय खर्चनु पर्नेछ ।
राजनीति तथा समाजसेवामा परिश्रम गरे अनुसार पद प्रतिष्ठा नपाइने हुँनाले मन खिन्न हुँनेछ । व्यापार व्यावसायमा साल भन्दा भन्दा ज्यादा समय खर्चिनु पर्नेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा समय लगानी गर्नेहरुले भनेजस्तो आम्दानी गर्न सक्नेछन् । हतारमा निर्णय लिँदा आफैलाई समस्या पर्न सक्ने तथा अरूको निम्ति प्रयोग भइनेछ । कुनै पहत्वकाक्षी योजनाहरू भए केही समयको लागि थाती राख्नुहोला । कुनै नया काम को थालनी गर्दा सोच बिचार गर्नु होला । सामाजिक संजालको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नियमित काममा दाजुभाइ तथा आफन्तको सहयोग हुँने हुँदा मन प्रसन्न हुँनेछ । उत्पादित उद्योगमा लगानी बढाई भने जस्तो रुपैयाँ पैसा कमाउँन सकिनेछ । सानो प्रयत्नले राम्रो काम गरी फाइदा लिन सकिनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरू परास्त हुँनेछन् । छोटो, रमाइलो तथा उपलब्धिमुलक यात्रा हुँने अधिक सम्भावना रहेको छ । पराक्रम बढेर जाने हुँनाले जोसिलो काम गर्ने जाँगर आउँनेछ ।
तपाईँको आलोचना गर्नेहरु बढ्ने योग रहेको छ । माया प्रेममा धोका हुँनेछ भने घर परिवारमा आफन्त तथा पति पत्नी बिच मनमुटाव बढ्नेछ । व्यापार व्यावसाय खस्केर जाने हुँनाले दैनिक गुजारा गर्न गाह्रो हुँनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरूको अवरोधले आउँन तथा हुनै लागेको फाइदाको सम्भावना टरेर जानेछ । मामा घर तिर बाट भनेजस्तो सहयोग प्राप्त हुँनेछ । सामाजिक संजालको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा समय लगानी गर्नेहरुले भनेजस्तो आम्दानी गर्न सक्नेछन् । पढाई लेखाई तपाईँ आफ्नै कारणले बिग्रन ग्रहयोग रहेको छ ।
नयाँ कामहरू गरेर आम्दानीका स्रोतहरू बढाउँन सकिनेछ । विभिन्न अवसरहरूले पछ्याउँने हुँदा राम्रा परिणाममुखी काम गर्न सकिनेछ । सामाजिक संजालको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । धन सम्पति जोड्ने योग रहेको छ । व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी भने जस्तो नाँफा कमाउँन सकिनेछ । विद्यामा राम्रो प्रगति हुँने हुँदा पढाई लेखाइमा मन जानेछ । सरकारी सम्पत्ति तथा पृत्रिक सम्पत्ति हात लागि हुँने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । माया प्रेममा धोका हुँनेछ दाजुभाइ वा अग्रजहरूको सुझाव तथा सल्लाह मानेर अगाडि बढ्दा सफलता पाउँन सकिनेछ ।
पारिवारिक जमघट वा घर परिवारमा आफन्त सँगै रहेर मिष्टान्न भोजन लिने धेरै अवसर मिल्ने हुँनाले सबै खुसी रहनेछन् । भौतिक बस्तुको प्रयोग गर्न पाइने तथा राम्रा पहिरनमा सजिएर अरूको मन लोभ्याउँन सकिनेछ । तपाइबाट राम्रा काम हुँने हुँनाले परिवार तथा साथीभाइहरू खुसी हुँनेछन् । पढाई लेखाइमा सुधार गरी नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याउँन सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको साथ तथा समर्थन रहनेछ । पराक्रम बढेर जाने हुँनाले जोसिलो काम गर्ने जाँगर आउँनेछ ।
← सिटिजन्स बैंकले एफपीओ निष्कासन गर्ने, कति कित्ता जान्नुहोस
सेमि अनलाइन भनेको के हो ? कारोबार कसरी गर्ने ? (भिडियो सहित) जान्नुहोस →
April 17, 2018 Aagan Post 0